Qaar badan oo ka mid ah Cayaartoydii Xulka Talyaaniga oo Cayaaraha Caalamiga ah ka fariistay+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Qaar badan oo ka mid ah Cayaartoydii Xulka Talyaaniga oo Cayaaraha Caalamiga ah ka fariistay+Sawiro
(14-11-2017) Qaar badan oo ka mid ahaa ciyaaryahannadii xulka qaranka Talyaaniga u saftay kulankii ay kaga hadheen Koobka Adduunka ee Sweden, ayaa shaaciyey inay ka fadhiisteen ciyaaraha caalamiga ah ama xulka qarankooda Talyaaniga.
Saddex ciyaartoy oo udub-dhexaad u ahaa guulihii xulka qaranka Talyaaniga sannadihii u dambeeyey ayaa shaaciyey inay fadhiisteen, waxaana la filayaa in qaar kale ay go’aankaas oo kale qaataan.
Buffon oo 39 jir ah ayaa isla markii ay ciyaartu dhamaatay ku dhowaaqay inuu ka fadhiistay xulka qarankiisa, waxaana uu noqday go’aan ka soo hormaray wakhtigiisii oo ku muddaysnaa badhtamaha sannadka dambe.
Ciyaaryahanka laf-dhabarta ah ee Andrea Barzagli ayaa guul-darrada xulka dalkiisa ugu daray war kale oo naxdin leh, kaddib markii uu shaaciyey inuu ka fadhiistay guud ahaan ciyaaraha dalkiisa.
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Roma ee Daniele De Rossi ayaa isaguna shaaciyey in aanu u ciyaari doonin xulkiisa oo uu ka fadhiistay, laakiin go’aankiisu ma aha mid lama filaan ah, sababtoo ah da’diisa oo weynaatay iyo ciyaartiisa oo hoos u dhacday ayaa la filayay inuu si degdeg ah kabaha u tiiriyo.
Difaacyahanka Juventus ee Giorgio Chiellini oo marka uu garoomada ku jiro ay adkayd in gool laga dhaliyo, ayaa isagana la filayaa inuu si degdeg ah u shaaciyo inuu ka fadhiistay xulka qarankiisa, taas oo noqon doonta go’aan ay taageereyaashu ka nixi doonaan.
Tababare Giampiero Ventura ayaa isagana la filayaa inuu iscasilo, haddii uu tallaabadaas qaadi waayana waxa suurtogal ah in xidhiidhka kubadda cagta Talyaanigu uu shaqada ka caydhiyo.